GrabRewards နဲ့ဆို ပိုမိုက်
Grab အထူးလျှော့ဈေး အစီအစဉ်များနဲ့ ပွိုင့်တွေကို ကြိုက်တဲ့ဆုနဲ့လဲ (သို့) သိမ်းထားနိုင်ခွင့်က GrabRewards အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေပါ။
ပွိုင့်နည်းနည်းနဲ့ အမိုက်စားဆုတွေရနိုင်တဲ့ Flash Sale စတင်လိုက်ပါပြီ။ GrabRewards က သင့်အတွက် အမြဲပိုကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားသွားမှာပါ။
သင့်ပွိုင့်၊ သင်ကြိုက်သလို သုံးပါ
သင့်ခရီးစဉ်တခုလုံးအတွက် ကားခကိုပွိုင့်နဲ့လဲချင်တာလား။ ရပါတယ်။ သင့်မှာရှိတဲ့ ပွိုင့်ကို သင်ဘယ်လိုသုံးချင်လဲဆိုတာ သင်ပဲဆုံးဖြတ်ပါ။ သင့်ပွိုင့်များကို သင့်အကြိုက် သုံးလိုက်ပါ။
GrabRewards အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ Flash Sale ကနေ အရမ်းတန်တဲ့ Grab ၄၀% လျှော့ဈေး ကူပွန်တွေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
Update: Flash Sale က လက်ရှိ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ နောက်တစ်ခေါက် GrabRewards Flash Sale ကို စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦး။
ပွိုင့်တွေ ဆက်သိမ်းထားဖို့ Grab တစ်ကြိမ် အသုံးပြုလိုက်ရုံပါပဲ။
Grab ကို ဆက်ပြီး အသုံးပြုနေရုံနဲ့ ပွိုင့်တွေ ဆက်သိမ်းထားနိုင်မယ့် GrabRewards မူဝါဒအသစ် ချမှတ်ထားပါတယ်။ ပွိုင့်တွေ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးအောင် သင်လုပ်ရမှာက Grab တစ်ကြိမ် အသုံးပြုလိုက်ရုံပါပဲ။
တစ်ကြိမ် အသုံးပြုလိုက်ရုံနဲ့ သင့် GrabRewards ပွိုင့်တွေဟာ ၃ လအထိ ခံမှာပါ။ ပွိုင့်တွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ ၃ လ ပြည့်မြောက် နောက်ဆုံးရက်မှာ ကုန်ဆုံးမှာပါ။
တစ်လတည်းမှာ အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းက သင့်ပွိုင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ထပ်မတိုးစေပါဘူး။
ဆိုလိုတာက အောင်အောင်က ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာ တစ်ကြိမ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပွိုင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်က ဧပြီ ၃၀ ပါ။ သူ နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ လကနေ နောက် ၃ လမြောက် နောက်ဆုံးရက်ပါ။
အောင်အောင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ နောက်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါတယ်။ သူ့ပွိုင့်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ဟာ မေ ၃၁ ရက်နေ့ ဖြစ်သွားမှာပါ။
*ပုံမှာ ဉပမာယူရန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုများတဲ့ ပွိုင့်တွေနဲ့ Rewards
တွေရဖို့ ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေ
Rewards တွေ ပွိုင့်တွေ ပိုရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအသစ် တစ်ခု
Challenges ကမ္ဘာမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင့်အပလီကေးရှင်းအတွင်းမှာ ကစားရင်း အနိုင်ရယူနိုင်မယ့် အသစ်စက်စက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ပါ။ အနိုင်သိမ်းဖို့ ပျော်စရာ challenges တွေ စာရင်းကို ဝင်ကြည့်ပါ။ လုပ်ရမယ့်အချက်တွေကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီး ပိုစိတ်လှုပ်ရှားရာကောင်းတဲ့ rewards တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ သင်က challenge သမားတစ်ယောက်လား။ အခုပဲ Challenges မှာ ပါဝင်ပြီး Grab က အများကြီးပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
ဘယ် challenge ကို လုပ်ဆောင်ပါမလဲ။
အပို GrabRewards ပွိုင့်မျာ
ပါတနာ rewards များ
လိုအပ်သော ပွိုင့်များ: > 0
လေ ျှာ့ဈေး REWARD များ
စီးနင်းမှုနဲ့ GrabFood rewards တွေကိုပိုနည်းတဲ့ GrabRewards
Silver အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှရှိ လေဆိပ်နားနေခန်း ၅၀ (မကြာခင်
ပိုများပြားလာမှာပါ)တွင် ကြိုတင်စာရင်သွင်းစရာမလိုဘဲ အထူးနှုန်းထား ၂၀% အထိဖြင့်
•အရက်ဘီယာများနဲ့ ရေချိုးခန်းများကိုတော့ အချို့သော လေဆိပ်နားနေခန်းများမှာသာ
ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာြကည့်ပါ။
GOLD အတွက် သွားကြစို့
သုံးလတစ်ကြိမ် GRABREWARDS အကျိုးခံစားခွင့်မျာ
သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊အထူးလေ ျှာ့ဈေး
Gold အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှရှိ လေဆိပ်နားနေခန်း ၅၀ (မကြာခင်
ပိုများပြားလာမှာပါ)တွင် ကြိုတင်စာရင်သွင်းစရာမလိုဘဲ အထူးနှုန်းထား ၄၀% အထိဖြင့်
အရှေ့တောင်အာရှရှိ သတ်မှတ်ထားသော လေဆိပ်များအတွင်း စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း ၇၀ ကျော်တွင်
လျှော့ဈေး ၁၀%ထိ ခံစားခွင့်
ပလက်တီနမ်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အတွက် ဆုရမှတ် နှစ်ဆ
ပလက်တီနမ်သီးသန့်သုံး Grab voucher တွေအသုံးပြုပြီးအထူးခံစားခွင့်တွေသက်သာရယူလိုက်ပါ။
ဘာဘောက်ချာတွေရထားလဲ ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ သင့်အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ My
လစဉ် GRABREWARDS ခံစားခွင့်များ
သီးသန့်လစဉ်အကျိုးခံစားခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊အထူးလေ ျှာ့ဈေး
ပလက်တီနမ်သာခံစားခွင့်ရှိတဲ့ HOTLINE နံပါတ်
သင့်အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ တစ်ဆင့် ကျွနု်ပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး
Platinum အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှရှိ လေဆိပ်နားနေခန်း ၅၀ (မကြာခင်
ပိုများပြားလာမှာပါ)တွင် ကြိုတင်စာရင်သွင်းစရာမလိုဘဲ အထူးနှုန်းထား ၅၅% အထိဖြင့်
ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာကြည့်ပါ။ကည့်ပါ။
လျှော့ဈေး ၂၀%ထိ ခံစားခွင့်
ပွိုင့်တွေကို ဘယ်လို ရရှိနိုင်မလဲ။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဇယားတွေကို ကြည့်ပါ။ GrabPay
အသုံးပြုရုံနဲ့ ပွိုင့်တွေ ပိုရနိုင်တယ်ဆိုတာတော့
GrabRewards ကို ဘယ်မှာ ရှာရပါမလဲ။?
သင့်ရဲ့ Grab app မီးနူးထဲမှ GrabRewards ရွေးချယ်ပါ။
Your preferrred Reward category သို့မဟုတ် Special deals ကိုရှာဖွေရွေးချယ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသော Category အမျိုးအစားအလိုက် Reward များကို ကြည့်ရှုရှာဖွေပါ။
သင့်GrabRewards points များကို အသုံးပြုပြီး Rewards များကို ချက်ချင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
သင့်ပွိုင့်တွေရဲ့ သက်တမ်းကို စစ်ဆေးပါ
သင့်ပရိုဖိုင် ရုပ်ပုံ ကိုနှိပ်ပါ။
GrabRewards အမှတ်အသား ကို နှိပ်ပါ။
သင့် အဖွ့ဲဝင် အချက်အလက်တွေကို တွေ့ရှိနိုင်ဖို့ ဒီနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်မှာ ကျန်ရှိတဲ့ ပွိုင့်လက်ကျန် နဲ့ ပွိုင့် ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးမယ် ဆိုတာ ဒီနေရာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
GrabRewards အမှတ်များကို ဘယ်လိုရယူပြီးဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ?
GrabRewards အမှတ်များကို Grab ဖြင့်ကားစီးနင်းခြင်းများ အစရှိသော Grab နှင့်ပါတ်သက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ရယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ရရှိထားသောအမှတ်များကို GrabRewards ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်သွားရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုရှာရန် Grab ၏ပင်မစာမျက်နှာရှိ Rewards ပေါ်သို့နှိပ်၍ဝင်ရောက်ပါ။
မိမိနိုင်ငံပြင်ပတွင် Grab အသုံးပြုသည့်အခါ GrabRewards များရယူနိုင်မည်လား ?
ဟုတ်ကဲ့၊ ပွိုင့် ရရှိမှာပါ။ အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင် (အင်ဒိုနီးရှားတွင် OVO ပွိုင့်များ အသုံးပြုတဲ့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားမပါဝင်ပါ)တွင် Grab ယာဉ်စီးနင်းမှု၊ GrabFood စားစရာ ပို့ဆောင်ရေး၊ GrabExpress အမြန်ချောပို့နဲ့ များစွာသော Grab ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် GrabRewards ပွိုင့်များ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပေးတဲ့ ပွိုင့်ရရှိမှုနှုန်းအတိုင်း ပွိုင့်ရရှိမှာကိုတော့ သတိပြုပေးစေလိုပါတယ်။
မိမိရဲ့ GrabRewards အမှတ်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားနိုင်ပါသလား ?
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စပြီး GrabRewards မှ ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်း ပွိုင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း (Activity Based Points Expiry) ကို စတင်ကျင့်သုံးတာကြောင့် Grab သုံးနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ပွိုင့်သက်တမ်း တိုးတိုးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ လမှာ အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ် (ပွိုင့်ရရှိမယ့်) Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုလိုက်ရုံနဲ့ သင့်ပွိုင့်တွေကို ဆက်လက်စုသွားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
GrabRewards အသင်းဝင်ဖြစ်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမလဲ ?
သင် Grab ကို အသုံးပြုနေသမျှ အလိုအလျောက် GrabRewards အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နေမှာပါ။ အဖွဲ့ဝင် အဆင့် ၄ မျိုး (Member ၊ Silver ၊ Gold ၊ Platinum) သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ပွိုင့်များ ပြည့်မီတာနဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ရရှိမှာပါ။ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် လျှော့ဈေးများ၊ ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ မိတ်ဖက်သီးသန့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ ဇယား အား ကြည့်ပြီး နောက်အဆင့် တက်ရောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ GrabRewards ပွိုင့်နဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ဲ့ GrabRewards အဆင့်များ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသလား ?
သင့်ရဲ့ GrabRewards အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လိုအပ်သောအမှတ်များကို ၃ လအတွင်း (ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်) တွင်စုဆောင်းနေသ၍ သင့်ရဲ့ အသင်းဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား နောက်ထပ် ၃ လ အချိန်အထိထိန်သိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ GrabRewards အဆင့်မှ တဆင့်ကျဆင်းသွားပါက အကျိုးခံစားခွင့်များ ဘာဖြစ်သွားနိုင်သလဲ ?
သင့်ရဲ့လက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်မှ ကျဆင်းသွားပါက ယခင်တဆင့်မြင့်သော GrabRewards အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် Grab ကိုပိုမိုသုံးစွဲ၍ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လုံလောက်သောအမှတ်များ စုဆောင်းခြင်းဟာ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ GrabRewards ပွိုင့်များ ပိုမိုရယူနိုင်ရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Platinum အသင်းဝင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် သီးသန့်ဘောက်ချာများကို ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသလဲ ?
သီးသန့် Grab ဘောက်ချာများကို သင့်ထံသို့မကြာခဏ ပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဘောက်ချာများနှင့်လွဲချော်ခြင်း မဖြစ်စေရန် Grab app အတွင်းရှိ My Rewards စာမျက်နှာအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးစေလိုပါတယ်။
မိမိရဲ့ အသင်းဝင်အဆင့်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသလား ?
သင့်ရဲ့ GrabRewards အသင်းဝင်အဆင့်နှင့် Booking.com ရဲ့ Genius အသင်းဝင်အဆင့်များမှာ စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် လွှဲပြောင်း၍မရနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ Booking.com မှ Genius အသင်းဝင်အဖြစ် အကျိုးခံစားခွင့်မှာ သင့်ရဲ့ GrabRewards အသင်းဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
* Grab က reward များနဲ့ ငွေသား သို့မဟုတ် GrabPay (credit/debit cards) များအသုံးပြုတိုင်း ရရှိသော ပွိုင့်များကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှု မရှိဘဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့် ရှိပါတယ်။.